Faa'iidada Samsung oo hoos u dhacday - BBC News Somali
Faa'iidada Samsung oo hoos u dhacday
27 Oktoobar 2016
Image caption Faa'iidada Shirkadda ayaa gaartay heerkii ugu hooseeyey muddo laba sano ah.
Faa'iidada shirkadda muddadii u dhaxaysay Luulyo ilaa Siteembar 2016 ayaa 30% hoos u dhacday, taasoo ah 4.6 Bilyan oo Doollar, waana heerkii ugu hooseeyey ee ay gaarto muddo laba sano ah.
Shirkaddan oo ah tan ugu ballaaran dunida ee samaysa telefoonnada casriga ah (smartphones) ayaa joojisay inay soo saarto telefoonka Galaxy Note 7, ka dib markii la soo sheegay inuu dab ka kaco.
Dib ula noqoshada telefoonnadaas, iyo shirkadda uu loollanku kala dhaxeeyo ee Apple oo dhamaystirtay nooca ugu dambeeya ee telefoonkeeda iPhone, ayaa dharbaaxo ku noqday sumcadda xagga tayada ee Samsung iyo aaminkii lagu qabay.
Image caption Telefoonka Note 7 oo gubtay
Samsung waxay sheegaysaa in qaybta samaysa telefoonnada gacanta ay hadda diiradda saari doonto sidii loo ballaarin lahaa iibinta qalabka cusub ee ay samaynayso iyo sidii ay dib ugu hanan lahayd kalsoonida macaamiisha.
Telefoonka cusub ee Galaxy Note 8 ayaa lagu wadaa in aan la soo saarin ilaa sannadka soo socda.
Image caption Saamileyda ayaa taageeray in Lee Kun-hee lagu soo daro guddiga shirkadda maamula.
Dhinaca kalena, saamileyda shirkadda Samsung ayaa taageeray in Lee Jae-yong lagu soo daro guddiga sare ee shirkadda maamula. Lee waxaa awoowe u ah ninkii shirkadda aasaasay, Lee Byung-chull, waxaana dhalay guddoomiyaha shirkaddaas, Lee Kun-hee.
Dadka wax dhaliila ayaa su'aal ka keenay magacaabidda Lee loo magacaabay xilkaas, ayagoo ku doodaya inuusan hore u soo qaban jago sidaan u sarraysa, uuna guddiga ku soo galay dhalyo ee uusan mutaysan.